देउरालीको अध्यक्षमा तामाङ – GadhiKhabar
देउरालीको अध्यक्षमा तामाङ
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०८:४४ Rajendra Rai	0 Comments
चौदण्डीगढी नगरपालिका ३ नं. वडाको देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा हर्कराज तामाङ निर्वाचित भएका छन् । बुधबार सावउसको कार्यालय परिसरमा भएको निर्वाचनले तामाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हो ।
समितिको उपाध्यक्षपदमा भने टेकबहादुर मगर निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार अध्यक्ष पदका लागी रेडियो चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रेका तामाङले मोवाइल चुनाव चिन्हका आफ्ना प्रतिद्वन्दी निलम राईलाई १ सय ३ मतले पराजित गरेको थियो ।
तामाङले २ सय ३७ मत प्राप्त गरे भने राईले १ सय ३४ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी उपाध्यक्ष पदका लागी बस चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेद्धरी दिएका मगरले हवाइजहाज चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा आएका ठाकुरजी राई ६६ मतले पराजय भएका हुन । मगरको विजयी मत २ सय १४ रहेको थियो भने राईको १ सय ४९ मत रहेको थियो । उपाध्यक्ष पदकै अर्का उम्मेद्धवार भद्रसिङ तामाङले भने ५ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।
४ सय ७५ घर धुरी उपभोक्ता रहेको समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षपदको निर्वाचनमा ३ सय ९९ सय मत मात्र खसेको थियो । वडा अध्यक्ष पर्शुराम राईको संयोजकत्वमा बनेको निर्वाचन समितिले बुधबार बेलुका साँझमा मत परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरुको चयन भने यस अगाडी नै निर्विरोध भईसकेका छन् ।
← विपद सम्वन्धि एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
एकचोटी पुग्नै पर्ने गाउँ हो, बालचन्द्रको गाउँ →
हजारौ शुभेच्छुकबीज वडाध्यक्ष मगरको अत्येष्टि
२२ मंसिर २०७७, सोमबार १३:५३ Rajendra Rai 0
बेल्टारको डिपार्टमेन्टमा चोरी गर्ने पक्राउ
२९ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:४८ Rajendra Rai 0
उदयपुर कांग्रेस सभापतिमा कार्कीको प्यानल विजयी
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १९:१० Rajendra Rai 0
बेल्टार/मंसिर १३। नेपाली कांग्रेस उदयपुर जिल्ला कार्यसमितिको सभापति पदमा हिमाल कार्की विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औँ
चौदण्डीगढीमा माओवादीको नेतृत्व चयनमा सकस
११ मंसिर २०७८, शनिबार २०:०४ Rajendra Rai 0
उदयपुर कांग्रेस सभापतिमा कार्की र बस्नेत चुनावी मैदानमा
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १९:३९ Rajendra Rai 0
उदयपुर क्षेत्र नं. १ मा मन्त्रीसहित २५ महाधिवेशन प्रतिनिधि
९ मंसिर २०७८, बिहीबार २०:५२ Rajendra Rai 0
झोडापाटामा पनि कालोपत्रे सडक